Oromia at African Night 2011 - University Of Minnesota - OPride.com
Surraa Oromiyaa Irraa*
Adunyaa kana keessatti Saboonni akka Oromoo saba biroon waggaa dheeraaf koloneeffattoota jala turan tokko lama miti. Ilmi namaa kam iyyuu isa kaan irraan waan inni ittiin adda tahe hin qabu, Garuu inni tokko isa kaan gad qabuun eenyummaaf mirga uumamaa isaa irraa mulquun, Seenaaf aadaa isa tokkoo awwaalee dabruu barbaada. akkuma Oromoon mammaaku, dhugaan ni qallatti malee hin cittu jedhu san haqni guyyaa isaa eeggatee gad baha.
Guyyaa kaleessa jechuun Ebla 2/2011 guyyaa galgala Afrikaa/ African night @ University of Minnesota/ gaggeeffamee dabre irratti barattoonni Sudaan Kibbaa/ south Sudan/ akkuma Barattooni Afrikaa keessa jiran marti waan saba isaanii calaqisiisu namoota kumaan lakkawaman fuulduratti Agarsiisan, isaanis waltajjiitti ol bahan. Kan nama ajaa’ibu Barattooni kun waltajjii kana kan argatan yeroo jalqbaaf kan jedhun dhagahe, dhugaa ta’uu isaas hin shakkine.
Tarii Barattoonni kun yeroo dheeraf waltajjii san argachuuf yaalii godhaa turanii laata? Hawwaa turanii laata? Moo guyyaa kana jechuun aduu Bilisummaa har’a ifteef kana eegaa turan laata? Gaaffilee kana deebissuun kanuma isaanii haa ta’u. Garuu kanas tahu sana ani hedduun gammadef …. Achuma dhaabbadhee isa nuti waltajjii kana waggaa waggaan argannu sana waliin wal bira qabeen, kunis jiraa kan jedhun of gaafadhe.
Baratoota Sudaan kibbaan baga gammadan jenna.